काङ्ग्रेसको प्रश्न: विप्लव समूह र ओली समूहमा के फरक छ ? « Himal Post | Online News Revolution
काङ्ग्रेसको प्रश्न: विप्लव समूह र ओली समूहमा के फरक छ ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ९ मंसिर ०९:०९
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको बताएका छन् ।
“केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको यो अवधिमा उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुईजनाको हत्या भएको छ । फरक घटनामा कमल गाउँपालिका बासिन्दा युवा व्यवसायी खेमराज पौडेल तथा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका पाका व्यत्तिः अलगचन्द राजवंशी मारिएका छन्,” प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न छ, “हत्या, अपहरण, बलात्कार र एसिड आक्रमणका घटना यो अवधिमा बढेर गएको छ ।”
प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिः
उपनिर्वाचन सरकारलाई सच्याउन मतदाताका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको अपिल हामी गरिरहेका छौं । त्यसैले मंसिर १४ को मिति नजिक आइरहंदा एकातर्फ हामी नेपाली कांग्रेसलाई मत दिन जरुरी कारणहरु उल्लेख गरिरहेका छौं भने अर्कातर्फ वर्तमान सरकारको असफलताका तथ्य सार्वजनिक रुपले राखिरहेका छौं ।
यस क्रममा रचनात्मक प्रतिपक्षका नाताले आज हामी बितेको २१ महिनामा देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा बढेको प्रतिकुलताको प्रतिनिधिमुलक चित्र सरकार र मतदाता दुवैका समक्ष राख्न चाहन्छौं ।
• केपि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको यो अवधीमा उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा २ जनाको हत्या भएको छ । फरक घटनामा कमल गाउँपालिकाका बासिन्दा युवा ब्यवसायी खेमराज पौडेल तथा गौरिगञ्ज गाउँपालिकाका पाका ब्यक्ति अलगचन्द राजवंशी मारिएका छन् ।
• काठमाडौ उपत्यकामा दुई बालक अपहरणपछि मारिएका छन् । पहिलो— प्रधानमन्त्रीको निजि घर रहेको बालकोटको नजिक कांडाघारीमा, दोस्रो— प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पश्चिम बसुन्धारामा ।
• उपत्यकामै असी बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पूर्व राजदूत केशव झाको यहि अवधीमा बीभत्स ढंगले हत्या भयो ।
• रोल्पामा नेपाल तरुण दल लिवाङका सभापति रोहित पुन तथा सर्लाही र रुपन्देहीमा गरेर नेपाली कांग्रेसका अन्य ३ युवा साथीको हत्या नेकपाका कार्यकर्ताहरुको हातबाट यो अवधीमा भयो ।
• सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको झैं एउटै नाम र एकै झण्डा बोकेको विप्लव समुहको हिंसात्मक गतिविधिले पनि कतिपय बेला शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको छ ।
• कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १६ महिना पुग्दापनि दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याउन सरकार सफल हुन सकेको छैन ।
• हत्या, अपहरण, बलात्कार र एसिड आक्रमणका घटना यो अवधिमा बढेर गएको छ ।
शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विरासतमा नेकपाले सहज राजनैतिक वातावरण प्राप्त गरेको थियो । तर यस्तो सहजताको समयमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने निरन्तर खस्किनु सिंगो देशका लागि दुःखद बिषय हो ।
हाम्रो प्रश्न छ : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कहिले गर्ने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भने: संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार
कुलमानका समर्थकसंग डरायो सरकार: आन्दोलन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कडा आदेश
काठमाडौं- विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमानलाई नियुक्ति गर्न भन्दै विरोध र आन्दोलन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले
नेकपाको सचिवालय बैठक सारियो
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सारिएको छ। शुक्रबारका लागि
प्याज महंगोमा बेच्नेलाई १५ लाख जरिवाना
काठमाडौं- कृत्रिम अभाव गराएर प्याजमा कालोबजारी गर्ने ८ व्यापारीलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही